Annaga nagu saabsan - Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd.
Lacag bixinta soo socota ee saamiyada Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd.
Lacag bixinta soo socota ee saamiyada Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd.waxaa la aasaasay 2010-kii gudaha Binzhou, magaalada ganacsiga laga soo galo ee Shandong.Warshada ayaa ku fadhida dhul dhan 10,000 mitir oo laba jibbaaran.Shirkaddu waxay leedahay meel juqraafi ah oo heersare ah, una dhow Dekedda Qingdao.Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. waa shirkad wax-soo-saar hal-joojin ah oo isku-dhafan wax-soo-saarka, R&D, iibinta iyo adeegga.Waxay leedahay koox maareyn xirfad leh iyo koox R&D ah oo qaan-gaar ah, waxayna soo saari doontaa 1-2 badeecooyin cusub bil kasta.Alaabada ugu muhiimsan ee shirkadu waaxadhig bir galvanized, Xarig bir ah oo aan bir lahayniyoxadhig bir ah oo caag ah oo dahaarka leh, oo soo saari kara tilmaamo gaar ahxadhkaha birta ahsida waafaqsan shuruudaha macaamiisha.Alaabooyinka kor ku xusan waxaa si weyn loogu isticmaalaa saadka, dekedaha, dhismaha, xargaha, kalluumeysiga, dhismaha, gaadiidka iyo warshadaha kale.
Shirkaddu waxay si adag u soo saartaa si waafaqsan GB, ISO, DIN, JIS, AISI, ASTM, ISO9001-20000 heerarka tayada caalamiga ah.Tayada alaabadu waa mid deggan oo la isku halleyn karo, waxayna ku guulaysatay macaamiisha cusub iyo kuwa hore ee xoogga sare, adkaanta sare, dabacsanaan la'aanta, xirashada caabbinta iyo faa'iidooyinka kale.Sanadihii la soo dhaafay, alaabooyinka waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Afrika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo dalal kale iyo gobollo.
Shirkaddu waxay u hoggaansami doontaa falsafada ganacsiga iyo ujeedada daacadnimada iyo hubinta tayada, waxayna qaadan doontaa falsafada maamulka ee xoogga saaraysa maareynta bani-aadmiga iyo khibradda macaamiisha, si joogto ah u ganacsi u samaynta, iyo qaadashada waddada horumarka waara ee hagaha, waxayna ku dhiirigelisaa shirkado badan inay isticmaalaan. alaabtayada.Sii macmiisha si fiican u isticmaalka jidhka.Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa baayacmushtarka iyo asxaabta kala duwan ee dalka iyo dibadiisaba in ay u yimaadaan baadhitaan, mudaaharaad, gorgortan ganacsi, wax wada qabsi iyo iskaashi, una raadiyaan horumar guud oo ay abuuraan wacdaro.
Shaqaaluhu waa hantidayada ugu qiimaha badan.Shirkaddayadu waxay ahmiyad weyn siisaa caafimaadka jidhka iyo maskaxda ee shaqaalaha.Sidaa darteed, shirkadeena inta badan waxay abaabushaa ciyaaraha kooxda, hawlaha dhismaha kooxda, safarka iyo hawlaha kale si loo kordhiyo isku-duubnida, kalsoonida iyo mas'uuliyadda kooxda.
xakamee xadhig boodi, xadhig boodboodka, xadhig booda caqli, xadhig xirfad leh, xadhig la'aan xad-dhaaf ah, xadhig ka booda iibso,